डाक्टरलाई कारबाहीको धम्की दिने ‘भ्रष्ट हस्ताक्षर’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १० गते १५:३७
जनकपुरको राहत : पाउनेले भन्छन्- ‘सडेको चामल’, गुण नियन्त्रण कार्यालय भन्छ- ‘गुणस्तरीय!’
महामारीका बेला सीमामा गएकाे सशस्त्र प्रहरी के अब सधैं उतै बस्छ?
एउटा डाक्टरको मनाेवाद : कोभिड-१९ ले देखाएको हाम्रो धरातल
लकडाउनमा पशुपतिका भोका पशुपंक्षी बचाउँदै स्वंयसेवक
आइसियूबाहिर ५ रुपैयाँ
अस्पताल वार्डबाट लामो समयपश्चात मेरो हस्ताक्षर रहेको कागज हातमा लिएर एउटी ५० वर्षीया महिला निस्किन्छिन्। उनका खाली खुट्टामा कारुणिक दृश्य पर्छन् मेरा।
‘खै त चप्पल? मैले प्रश्न गरेँ।
मेरो हस्ताक्षरित कागज देखाउँछिन्। उनको निरीहता डिस्चार्ज गर्ने समयमा थाहा हुन्छ। उनले डिस्चार्ज गर्ने काउन्टरमा पैसा तिर्न बक्यौता रहन्छ। जसको निम्ति मेरो हस्ताक्षर कमजोर हुन्छ। गभर्नरको हस्ताक्षर कुदिरहेका नोटहरूले मात्रै पार लगाउन सक्ने हुन्छ।
एकजना विद्यार्थीको उदार मनले मात्र ती नोटहरूको प्रबन्ध गर्न सकियो। मेरो भित्री चक्षुले उनको भोकले बटारिएको पेटको दृश्य पनि देख्छु। आफ्नो हस्ताक्षर देखेर मलाई आज हस्ताक्षरको नालिबेली नियाल्न मन हुन्छ।
उनका पाइला धेरै कोस पर हिँड्नुपर्ने छ। त्यो पेटले केही दिन विद्रोह नगर्नुपर्ने छ। केवल पानीले शान्त पार्नुपर्ने छ। त्यो हिँड्ने बाटो पनि चिल्ला बाटा भइदिए त हुने।
तर, विकासे बजेटको विकासे कामले बनेका बाटाहरूले त्यो खाली पैतालालाई शितलता दिने गुन्जायस नै छैन। समयअगावै मक्किएका सडकहरू पनि कुनै न कुनै मनमा ‘हरि नभएकाको’ हस्ताक्षरको उपज हो।
कसैले कमिसन खाने प्रपञ्च गरेर त, कसैले आवश्यकताअनुसार सहयोग गरेर। सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने हस्ताक्षरलाई सलाम छ स्वास्थ्यकर्मीका तर्फबाट। स्वास्थ्यकर्मीलाई बिनाकारण कारबाहीको अप्रिय आदेश दिने हस्ताक्षरप्रति खेद छ मेरो।
समय सन्दर्भ, कोरोना कहरमा निम्तिएको बाध्यात्मक लकडाउनको हो। मेरा हस्ताक्षरले उनलाई अस्पतालबाट बिदाइ गर्‍यो। त्यही हस्ताक्षरले घर पुग्नलाई सहज पनि गरेको होला भन्ने अनुमान छ मेरो। कोभिडको जटिल परिस्थितिमा पनि विभिन्न हस्ताक्षरले आफ्नो कर्म देखाउने मौका पाएका छन्।
लकडाउनको कडा आदेश दिने हस्ताक्षरले अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई चिन्न सकेन। सबैका लागि बराबर निर्देशन। घर फर्किरहेका मजदुरदेखि अस्पतालबाट निस्केका बिरामी र कुरुवासम्म सबैलाई एकै नजरले व्यवहार गर्‍यो। त्यसैले, कोही महाकालीमा हाम फालेर नदी तर्ने साहस गरे। कोही हिँडेर कोसौं दुरी पार गर्ने विवशता देखाए। तर, सोही समयमा पासप्राप्त व्यक्तिलाई भने अर्को हस्ताक्षरले नरोक्ने बेहोरा दियो। आआफ्नो महत्त्व छ हस्ताक्षरको। शक्ति सङ्घर्षका चपेटामा परेका छन् अचेल हस्ताक्षरहरू।
कता गए ती संविधानमा देखिने हस्ताक्षरहरू? चुनावी घोषणापत्रमा राखिने हस्ताक्षरहरू कतै लुके कि साख गुमाए? निवेदन छ मेरो, कुनै हस्ताक्षरले ती अलपत्र परेका जनताको भोको पेटलाई शान्त गरोस्। घरसम्म पुग्न गाडी व्यवस्था गरोस्। एक छाक नै टार्न भए पनि अन्न प्रदान गरोस्। दस्तखतमा शक्ति हुनेहरूले जीवनमा एकपटक मनमा ‘हरि’ जगाउने कर्म गरे कति आशिष दिन्थे होला ती भोका पेट र उदासिएका मनहरूले। ठूला महलहरू खोल्न अनुमति दिने हस्ताक्षरले ती दुःखी मानव आत्माहरूलाई गिज्याउन खोजेको त हैन नि?
इतिहासका पानामा ती हस्ताक्षर विशिष्ट हुन्, जसले अर्थतन्त्र बलियो बनायो। जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मजबुत बनायो। जसले भूमिसुधार गर्‍यो। जसले सतिप्रथा अन्त्य गर्‍यो। जसले प्रजातन्त्रको आगमन गरायो। यस्ता अनेकौं देशभक्तका हस्ताक्षरहरूले आफ्नो पौरख देखाएर गर्व गर्ने मौका पाए। ती सबै पौरखी हस्ताक्षर हुन्।
बिल गेट्सको हस्ताक्षरले सधैं दान गर्छ। लोभ जागेकाहरूको हस्ताक्षरले सधैं कमिसन खाने माहोलमा मात्रै खरिद आदेश दिन्छ। राष्ट्रिय बजेटमा र्‍याल काढेर आफ्नै अनुकूलतामा बिनियोजन गर्ने हस्ताक्षरले के नै कायापलट काम गर्ला र? ती पूण्यवान् हस्ताक्षर हुन्, जसले कुलमानलाई चिनाउँछन्। जसले महावीर पुनलाई चिनाउँछन्। तर, लोभी र पापी हस्ताक्षर ती हुन्, जसले कागजमा मात्रै योजना पूरा भएको देखाउँछन्। जसले बलात्कारको अभियोगमा परेकालाई सम्म उन्मुक्ति दिन्छन्। जसले ठूलो रकम र शक्तिकेन्द्रहरूको सेटिङमा राज्यको ढुकुटी कुम्ल्याउँछन्। जसलाई राम्रै मोलमलाइमा अख्तियारबाट ‘क्लिन चिट’ दिइन्छ।
कहिले कसैको हस्ताक्षरले मान्छेलाई पिरोल्नु पिरोल्छन्। आफ्नो मत नमिल्ने र नबिक्ने कर्मचारीलाई सजिलै सरुवा गर्दिन्छन्। छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका डाक्टरलाई बँधुवा मजदुरजस्तो कुना कुनामा धकेल्छन्। भन्ने बेलामा स्कलरसिप, तर व्यवहार स्पोन्सरसिपजस्तो गर्छन्। माया गरेर राख्नुपर्ने समयमा लाइसेन्स खारेजीको धम्की दिन्छन्। चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई प्रशासन आदिबाट सजिलैसँग माफ गरिदिन्छन्। ती सब एक से एक पिराहा हस्ताक्षर हुन्।
इतिहासका पानामा ती हस्ताक्षर विशिष्ट हुन्, जसले अर्थतन्त्र बलियो बनायो। जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मजबुत बनायो। जसले भूमिसुधार गर्‍यो। जसले सतिप्रथा अन्त्य गर्‍यो। जसले प्रजातन्त्रको आगमन गरायो। यस्ता अनेकौं देशभक्तका हस्ताक्षरहरूले आफ्नो पौरख देखाएर गर्व गर्ने मौका पाए। ती सबै पौरखी हस्ताक्षर हुन्। अचेल त्यस्ता पौरखी र विवेकी हस्ताक्षर विरलै पाइन्छन्। हाम्रो देशको विडम्बना शायद यही नै होला।
भ्रष्ट हस्ताक्षरहरूले सधैं पौरखी हस्ताक्षरलाई जुध्ने गर्छन्। हस्ताक्षरको शान त्यसको सत्कर्ममा हुन्छ। न कि पाँडेपजनी, नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिनलाई। हस्ताक्षरको काम त त्यस्तो होस् जसलाई सबैले सम्मान गरुन्। शक्तिशाली दस्तखतहरूले आफ्नो विवेक र मान राखिदिए कति जाती हुन्थ्यो होला। त्यही आशा गरेर नै उमेर जाने भयो।
शक्ति नभएको हस्ताक्षर।
Tags: काेराेना, डा. शम्भु खनाल
One thought on “डाक्टरलाई कारबाहीको धम्की दिने ‘भ्रष्ट हस्ताक्षर’”
Eye Opener words but unfortunately no body cares..Thank you for suchawonderful writing.